ကွာသပတေး သားသမီးမြားအတှကျ ၂၀၂၂ခုနဈ တနှဈစာ ဟောစာတမျး – Shwe Pann Thee
Shwe Pann Thee Astrology ကွာသပတေး သားသမီးမြားအတှကျ ၂၀၂၂ခုနဈ တနှဈစာ ဟောစာတမျး
ကွာသပတေး သားသမီးမြားအတှကျ ၂၀၂၂ခုနဈ တနှဈစာ ဟောစာတမျး
ကွာသပတေးသားသမီးမြားတို့သညျ လုပျငနျးခှငျ့အတှကျ မကွာခဏ ခရီးထှကျရခွငျး ရှိပွိး အောငျမွငျမှုမြား ရရှိမညျ။ အမြားသဘောတူညီမှုကွောငျ့ လူမှုရေးနှငျ့ ဘာသာရေးကိစ်စ ဆောကျရှကျရမညျ။ မမြျောလငျ့ဘဲ ငှကွေေးမြား ဝငျလာတတျသညျ၊၊ အိမျခွံမွေ အဆောကျအဦး ဆောကျလုပျရကိနျး ရှိသညျ။
စကျစ်စညျးနှငျ့ အိမျခွံမွေ ဝငျကိနျး ရှိသညျ။ မိမိလှယျကူမညျဟု ယူဆသော ကိစ်စမြား အနှောကျအယှကျ ပေးခွငျး ခံရမညျ။ လုပျငနျးခှငျတှငျ မသမားသူတို့၏ လိမျလညျးမှု ခံရမညျ။ စကားမတညျသူမြား၊ စကားကို ဒှိဟပွောဆိုတတျသူမြားနှငျ့ ကွုံတှရေ့တတျသညျ။
ယခုနှဈတှငျ (16. 4. 2022 မှ စ၍ ( 16. 6. 2022) အထိ လုပျငနျးခှငျ့တှငျ အလောတကွီး မလုပျသငျ့ပါ။ ပညာရေးတှငျ ဝီရိယအားဖွငျ့ ကွိုးစားမှသာ အောငျမွငျမညျ။ ပွညျပသို့ လလေ့ာရေးခရီး သှားလာကိနျး ရှိမညျ။ စာမေးပှဲနီးလာလြှငျ ကနျြးမာရေးအနှောကျအယှကျမြား ဝငျလာတတျသညျ။
ပွညျတှငျး၊ ပွညျပ ဆကျသှယျရေးလုပျငနျးမြားလုပျခွငျး ကောငျး၏။ အလုပျသဈမြား တညျထောငျခွငျး ကောငျး၏။ ကုမ်မဏီထူထောငျခွငျး၊ ရတနာပစ်စညျးရောငျးဝယျ၊ ဆိုငျဖှငျ့ခွငျး၊ အပနျးဖွစေခနျးဖှငျ့ခွငျး၊ ဆကျသှယျရေးပစ်စညျးမြား ရောငျးဝယျခွငျး ကောငျး၏။
လုပျငနျးကိစ်စတှငျ အဂျါ၊ သောကွာသားသမီးမြားနှငျ့ တှဲဖကျ၍ ဆောငျရှကျသငျ့သညျ။ ပြိူရှယျသူမြား ဖူးစာရှငျအသဈနှငျ့ တှပွေိ့း စစေ့ပျကွောငျးလမျးမြား ရှိမညျ။ သို့သျော အလျောတကွီး ဆောငျရှကျခွငျးမြား မကောငျးပါ။ အိမျထောငျရှငျမြား အထငျလှဲခံရတတျသညျ။
သားသမီး၊ ဇနီးမယားတို့အတှကျ ငှကေုနျကွေးကမြားခွငျး၊ ကနျြးမာရေး ပွုစုစောငျရှောကျပေးရခွငျးမြား ရှိမညျ။ နယျဝေးဆှမြေိူးမြား အိမျသို့ အလညျအပတျ သှားလာခွငျး၊ အကူညီပေးရခွငျးမြား ရှိမညျ။ မိခငျဘကျမှ သားခငျြးမြား ကနျြးမာခြိူ့တဲ့၍ မိမိတာဝနျယူ ကူညီပေးရတတျသညျ။
ကနျြးမာရေးတှငျ မကျြစိရောဂါ၊ အရေးပွားရောဂါ၊ ဒူးနာ၊ ခါးနား၊ မတျောတဆ ထိခိုကျဒဏျရာရခွငျး ဖွဈတတျသညျ။
အထူးဟော… အရှမွေောကျအရပျသို့ ခရီးသှားခွငျး၊ လူမှုရေးကိစ်စဆောငျရှကျခွငျး ရှောငျကဉျြပေးပါ။ ဖုနျးနှငျ့ ရတနာ၊ ငှကွေေးမြား ကပြောကျတတျ၏။ မိမိလုပျငနျးလုပျဆောငျရာတှငျ မိမိလုပျငနျးလုပျဆောငျရာတှငျ တနလျာ၊ ရာဟုသားသမီးမြားဖွငျ့ ဆောငျရှကျခွငျးမြား အထူးဂရုစိုကျပေးပါ။
အကြိူးပေးအက်ခရာ – (က၊ ဆ၊ န၊ ဟ), အကြိူးပေးဂဏနျး – (၆. ၁. ဝ. ၄)
အကြိူးပေးအရောငျ – အပွာရောငျ၊ ခရမျးရောငျ၊ ဆငျစှယျရောငျ,
အကြိူးမပေးနနေံ – (တနလျာ၊ ရာဟု), အကြိူးမပေးအရပျ – အရှမွေ့ောကျ
ယတွာ- ဤနှဈလအပတျတိုငျ တဈနှဈလုံး မိမိနနေံ ဂွိုဟျဘုရား ကွာသပတေး နနေံနေ့ မိမိမှေးနမှေ့ အုနျးညှနျ့၊ သပွညှေနျ့၊ သီးညှနျ့၊ မွလေးပနျး၊ စှယျတျောပနျးညှနျ့တိုကို ရှပေနျးအိုးဖွငျ့ ဘုရားပူဇျောပေးပါ။ ပဲပွုတျ၊ ငခြိပျပေါငျး၊ ယို (၅)မြိူး ဆှမျးတျောကပျပေးပါ။
ဆရာကွီးမငျးသူရ အစီအမံယတွာ 09- 751089826/ 09- 767817917
ကြာသပတေး သားသမီးများအတွက် ၂၀၂၂ခုနစ် တနှစ်စာ ဟောစာတမ်း
ကြာသပတေးသားသမီးများတို့သည် လုပ်ငန်းခွင့်အတွက် မကြာခဏ ခရီးထွက်ရခြင်း ရှိပြိး အောင်မြင်မှုများ ရရှိမည်။ အများသဘောတူညီမှုကြောင့် လူမှုရေးနှင့် ဘာသာရေးကိစ္စ ဆောက်ရွက်ရမည်။ မမျော်လင့်ဘဲ ငွေကြေးများ ဝင်လာတတ်သည်၊၊ အိမ်ခြံမြေ အဆောက်အဦး ဆောက်လုပ်ရကိန်း ရှိသည်။
စက်စ္စည်းနှင့် အိမ်ခြံမြေ ဝင်ကိန်း ရှိသည်။ မိမိလွယ်ကူမည်ဟု ယူဆသော ကိစ္စများ အနှောက်အယှက် ပေးခြင်း ခံရမည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် မသမားသူတို့၏ လိမ်လည်းမှု ခံရမည်။ စကားမတည်သူများ၊ စကားကို ဒွိဟပြောဆိုတတ်သူများနှင့် ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။
ယခုနှစ်တွင် (16. 4. 2022 မှ စ၍ ( 16. 6. 2022) အထိ လုပ်ငန်းခွင့်တွင် အလောတကြီး မလုပ်သင့်ပါ။ ပညာရေးတွင် ဝီရိယအားဖြင့် ကြိုးစားမှသာ အောင်မြင်မည်။ ပြည်ပသို့ လေ့လာရေးခရီး သွားလာကိန်း ရှိမည်။ စာမေးပွဲနီးလာလျှင် ကျန်းမာရေးအနှောက်အယှက်များ ဝင်လာတတ်သည်။
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ခြင်း ကောင်း၏။ အလုပ်သစ်များ တည်ထောင်ခြင်း ကောင်း၏။ ကုမ္မဏီထူထောင်ခြင်း၊ ရတနာပစ္စည်းရောင်းဝယ်၊ ဆိုင်ဖွင့်ခြင်း၊ အပန်းဖြေစခန်းဖွင့်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်ခြင်း ကောင်း၏။
လုပ်ငန်းကိစ္စတွင် အဂ်ါ၊ သောကြာသားသမီးများနှင့် တွဲဖက်၍ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ ပျိူရွယ်သူများ ဖူးစာရှင်အသစ်နှင့် တွေ့ပြိး စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းများ ရှိမည်။ သို့သော် အလော်တကြီး ဆောင်ရွက်ခြင်းများ မကောင်းပါ။ အိမ်ထောင်ရှင်များ အထင်လွဲခံရတတ်သည်။
သားသမီး၊ ဇနီးမယားတို့အတွက် ငွေကုန်ကြေးကျများခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ပြုစုစောင်ရှောက်ပေးရခြင်းများ ရှိမည်။ နယ်ဝေးဆွေမျိူးများ အိမ်သို့ အလည်အပတ် သွားလာခြင်း၊ အကူညီပေးရခြင်းများ ရှိမည်။ မိခင်ဘက်မှ သားချင်းများ ကျန်းမာချိူ့တဲ့၍ မိမိတာဝန်ယူ ကူညီပေးရတတ်သည်။
ကျန်းမာရေးတွင် မျက်စိရောဂါ၊ အရေးပြားရောဂါ၊ ဒူးနာ၊ ခါးနား၊ မတော်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း ဖြစ်တတ်သည်။
အထူးဟော… အရှေမြောက်အရပ်သို့ ခရီးသွားခြင်း၊ လူမှုရေးကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း ရှောင်ကျဉ်ပေးပါ။ ဖုန်းနှင့် ရတနာ၊ ငွေကြေးများ ကျပျောက်တတ်၏။ မိမိလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် မိမိလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် တနလ်ာ၊ ရာဟုသားသမီးများဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းများ အထူးဂရုစိုက်ပေးပါ။
အကျိူးပေးအက္ခရာ – (က၊ ဆ၊ န၊ ဟ), အကျိူးပေးဂဏန်း – (၆. ၁. ဝ. ၄)
အကျိူးပေးအရောင် – အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ ဆင်စွယ်ရောင်,
အကျိူးမပေးနေနံ – (တနလ်ာ၊ ရာဟု), အကျိူးမပေးအရပ် – အရှေ့မြောက်
ယတြာ- ဤနှစ်လအပတ်တိုင် တစ်နှစ်လုံး မိမိနေနံ ဂြိုဟ်ဘုရား ကြာသပတေး နေနံနေ့ မိမိမွေးနေ့မှ အုန်းညွန့်၊ သပြေညွန့်၊ သီးညွန့်၊ မြလေးပန်း၊ စွယ်တော်ပန်းညွန့်တိုကို ရွှေပန်းအိုးဖြင့် ဘုရားပူဇော်ပေးပါ။ ပဲပြုတ်၊ ငချိပ်ပေါင်း၊ ယို (၅)မျိူး ဆွမ်းတော်ကပ်ပေးပါ။
ဆရာကြီးမင်းသူရ အစီအမံယတြာ 09- 751089826/ 09- 767817917
၅ ဂဏနျးသမားမြားအကွောငျး၅ ဂဏနျးသမားမြားအကွောငျး
၅ ဂဏနျးသမားမြားအကွောငျး မညျသညျ့လတှငျမဆို ၅ရကျ ၁၄ ရကျ ၂၃ ရကျ တှမှော မှေးတယျဆိုရငျတော့ သငျက ၅ ဂဏနျးသမားတယောကျပါ ☺ ၅ ဂဏနျးသမားမြားရဲ့စရိုကျလက်ခဏာ☺ ဖွတျထိုးဉာဏျကောငျးပီး ဖိအားမြားတဲ့ ကိစ်စရပျတှဆေိုလုံးဝမနှဈသကျတတျကွပါဘူး လှတျလှတျလပျလပျ ...